भान्जालाई अपहरण गरि फिरौती माग्ने मामा पक्राउ Global TV Nepal
आफ्नै भान्जालाई अपहरण गरि फिरौती माग्ने मामालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नै भान्जाको अपहरण गरेका महोत्तरी जिल्ला पिपरा गाउँपालिका वडा नं. ७ निवासी लक्ष्मेश्वर दासलाई सार्वजनिक गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश रानाभाटले अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक प्रलोभनमा परेर अपहरण गरेको पाइएको बताउनुभयो । धनुषाको नगइराइन नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित लग्माबाट ७ बर्षीय चन्दन दासलाई शनिबार दिउँसो १ बजे मोटरसाइकलमा बसाएर लक्ष्मेश्वर दासले अपहरण गरेका थिए । प्रहरीले बालकलाई शनिबार साँझ ८ बजे जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ कटैयाचौरीस्थित सरोज ठाकुरको घरबाट उद्दार गरेको थियो ।
कोरोना संकट: फ्रण्टलाईनमा सुरक्षाकर्मी
भिरबाट ट्रक खस्दा ३ जनाको मृत्यु